कांग्रेसको निष्कर्ष- सबै कुरा नेकपामै निर्भर छ (भिडियोसहित)
२०७७ फाल्गुण १३ बिहीबार १७:४८:००
कांग्रेसले अहिलेसम्म संसदभित्र विपक्षी दलकै भूमिकामा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनर्स्थापना गरेपछिको अवस्थामा पार्टीको धारणा तयार गर्न बिहीबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले संसद् पुनर्स्थापनापछिको समीकरणका विषयमा सबै कुरा नेकपासँगै निर्भर भएको र कांग्रेसले भूमिका निभाउने वेला नभएको ठहर गरेको हो ।
बैठकपछि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘उहाँहरूको पार्टी (नेकपा) फुटेको छैन । संसदीय दलको नेता ओलीजी नै हुनुहुन्छ । उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने हो कि होइन ? यी सबै कुरा संसद् बैठक बसेपछि मात्रै थाहा लाग्छन् । यो सबै कुरा उहाँहरूको पार्टीभित्रका कुरा हुन् । त्यसैले कांग्रेसले अहिल्यै यसो गर्छु वा उसो गर्छु भन्ने वेला आएको छैन ।’
उनले संसद् पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेकपा जसरी अगाडि बढ्छ, कांग्रेसले त्यही आधारमा निर्णय लिने बताए । ‘अहिले त यो सरकार ढल्ने वा नढल्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो हातमा छैन । हामीले त उहिल्यै जनमतको कदर गर्न सकेन भनेर भनिसकेका हौँ,’ डा. महतले भने, ‘त्यसैले यसमा कांग्रेसले अहिले निर्णय गर्नुपर्ने कुरै छैन । यो सबै कुरा नेकपामै निर्भर छ ।’
#कांग्रेस # संसद
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक देउवानिवासमा जारी
मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने सूचना पाएपछि संसद्को चालू अधिवेशन सोमबार नै अन्त्य
१५ वैशाखभित्र क्रियाशील सदस्यको विवरण पठाइसक्न कांग्रेसको निर्देशन
राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन अन्त्य
सरकारले संसद् स्थगित गरेर कायरता देखायो : नेता सिंह (भिडियोसहित)